Kuthiwa akalande irejista yesikole ofuna umazisi | News24
Kuthiwa akalande irejista yesikole ofuna umazisi
Durban - Ibhekene nengwadla indoda yakwaNyuswa okuthiwa ayilande irejista yesikole eyayifunda kuso, ukuze ikwazi ukushintsha imininingwane yokuzalwa kwayo, eyaphambana ngesikhathi ishaya umazisi ngo-1988.
UBongumusa Jerome Ndokweni uthi uselahle ithemba ngokuthi umazisi anawo okhomba ukuthi mncane ngeminyaka ewu-8, uzolungiseka njengoba uthishanhloko wesikole ayefunda kuso eshaya phansi ngonyawo ngokukhipha irejista yesikole ayinike yena.
UNdokweni uthe wazalwa ngo-1959 kodwa umazisi wakhe ukhomba ukuthi wazalwa ngo-1967.
"Bekunzima ukuthi ngiwushintshe ngesikhathi sengisebenza ngoba bewuhlale udingeka njalo umazisi, manje angisasebenzi," kusho uNdokweni.
OLUNYE UDABA:Imile impilo kowesifazane wase-KZN ongenawo umazisi
Uthe uma efuna umsebenzi uyahlekwa ngoba bavele bamtshele ukuthi akalinde impesheni bangafuni nokuyizwa eyokuthi uneminyaka ewu-45.
Imenenja yoMnyango wezaseKhaya KwaZulu-Natal, uMnuzane Cyril Mncwabe, ithe kungenzeka ukuthi kwenzeka iphutha uma kuthiwa akalethe irejista, kufuneka ikhophi yerejista.
Iphepha eliphethwe wuNdokweni elibonwe yiphephandaba libhalwe ukuthi kufuneka irejista, kubika iSolezwe.